बिश्व इतिहासमा यी १० माहामारी प्रकोप , जसले लियो करोडौको ज्यान ? Arthadaily: Search for truth and fact.
वैज्ञानिकहरू र चिकित्सा अनुसन्धानकर्ताहरूले वर्षौंदेखि महामारीको परिभाषामा फरक दिएका छन् । तर रोगको व्यापकतामा सबै सहमत छन् ।मानव इतिहासको सबैभन्दा क्रूर रोगहरूको प्रकोपलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका बीचमा नै महामारीको रूपमा परिभाषित गरिएको छ, विशेष गरी इतिहासभरि नै यसले २,००० वर्ष अस्तित्वमा करिब २७८-३२२ मिलियन मानिसहरूलाई मारेको छ।
अहिले कोरोना भाइरसको प्रकोपका कारण दुनियाँभरका करोडौं मानिसहरुको जीवन संकटग्रत छ । कुनै यस्तो समय जतिबेला यस्ता परिघटनाहरु हुँदै आएका छन् । जसमा धेरैको जीवनशैली र उनीहरुको जीवन नै तहस नहस भएको पाइन्छ । विश्वमा यस्ता १० ठूला घटनाहरु घटे । जसले मानिसको सम्पूर्ण जीवनशैलीलाई नै परिवर्तन गर्‍यो । त्यसलाई संक्षेपमा व्याख्या गरिएको छ ।
सन् १६५ को समयताका विश्व एउटा कठोर परिस्थितिमा गुज्रियो । एउटा महामारीका कारण करिब ५० लाख मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
सन् १३४६-५३ को समयताका विश्व अर्को एउटा झन् कठोर परिस्थितिमा गुज्रियो । एउटा महामारीका कारण विश्वका करिव ७ करोड पचास लाख देखि २० करोड मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए । जतिबेला बिश्वको ३५ % मानिस मरेका थिए । त्यतीबेला करिव ४७ करोड जनसंख्या थियो ।
सन् १८५२-६० को समयताका विश्व अर्को एउटा परिस्थितिमा गुज्रियो । एउटा महामारीका कारण विश्वका करिव १० लाख मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
सन् १८८९-९० को समयताका विश्व अर्को एउटा झन् कठोर परिस्थितिमा गुज्रियो । एउटा महामारीका कारण विश्वका करिव १० लाख मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
सन् १९१०-११ को समयताका विश्व अर्को एउटा कठोर परिस्थितिमा गुज्रियो । एउटा महामारीका कारण विश्वका करिव ८ लाख मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
सन् १९१८ को समयताका विश्व अर्को एउटा झन् कठोर परिस्थितिमा गुज्रियो । एउटा महामारीका कारण विश्वका करिव २ करोड देखि ५ करोड मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
सन् १९५६-५८ को समयताका विश्व अर्को एउटा कठोर परिस्थितिमा गुज्रियो । एउटा महामारीका कारण विश्वका करिव २० लाख मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
सन् १९६८ को समयताका विश्व अर्को एउटा कठोर परिस्थितिमा गुज्रियो । एउटा महामारीका कारण विश्वका करिव १० लाख मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।
सन् २००५-२०१२ को समयताका विश्व अर्को एउटा झन् कठोर परिस्थितिमा गुज्रियो । HIV ADIS महामारीका कारण विश्वका करिव ३ करोड ६० लाख मानिसले आफ्नो ज्यान गुमाउन बाध्य भए ।